श्रीमानलाई निद्राको औषधी खानामा खुवाएर प्रेमीसँग गर्थिन यस्तो ह’र्कत, एक दिन भयो सबै हद पार ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/श्रीमानलाई निद्राको औषधी खानामा खुवाएर प्रेमीसँग गर्थिन यस्तो ह’र्कत, एक दिन भयो सबै हद पार !
पुलिस चौकी प्रमुख गुरचरण सिंहका अनुसार सिमरले २३–२४ जुलाइको रातमा पतिलाई निद्राको औषधी खुवाएर निदाएको अवस्थामा जीवन लिइन् । यसको योजना उनले पहिल्यैदेखि बनाएकी थिइन् । उनका प्रेमी लभप्रितको खोजी भइरहेको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **